काठमाडौं, ७ फागुन । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको विश्वास गर्न पार्टी कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार काँग्रेस नुवाकोट जिल्ला कार्यसमितिको भवन उद्घाटन गर्दै देउवाले भने, ‘संविधान सम्बन्धी कुरा, कानुन नियमको कुरा गर्ने अदालत बाहेक को छ यहाँ ? अदालतलाई विश्वास गरौं न प्लिज । अदालतलाई विश्वास नगरेर कसको गर्ने यहाँ ?’
अदालतलाई धम्क्या’एर तर्साएर काम गराउने भए अदालत किन चाहियो भन्ने देउवाको प्रश्न थियो । ‘अदालतलाई धम्क्या’एर तर्सा’एर काम गराउने भए अदालत हटाइदिए भयो त । जसले बढी धक्म्याउछ उसको कुरा माने भइहाल्यो नि ,’ उनले भने । यस्तै देउवाले चुनाव हुँदैन भन्ने डर हटाउन आग्रह गर्दै चुनावका लागि तयार रहन निर्देशन दिँदै भने, ‘डराएर कहीँ हुन्छ। डर हटाउनुस्। चुनावमा भाग लिने जित्ने हो ।’
देउवाले चुनाव जसरी पनि हुने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि चुनाव हुने भएकोले तयारी अवस्थामा रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन् । ‘चुनाव हुन्छ-हुन्छ । ओलीले चुनाव नगरेर सुख पाउँछन् ?’ देउवाले भने, ‘प्रचण्ड–ओलीलाई चुनाव लागिसक्यो । चुनाव चिन्ह मागिरहेका छन् । हाम्रा साथीहरु चुनाव हुँदैन भनिरहेका छन् । चुनाव भयो भने के गर्ने ? चुनावबाट भाग्न त मिल्दैन ।’
देउवाले कांग्रेसका नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वि’रुद्ध बोल्न सक्ने भएको भन्दै धन्यावाद पनि दिए । उनले पुष्पकमल दाहालको वि’रुद्ध पनि बोल्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । ‘डर हटाउनुस् कांग्रेसलाई कसैले हराउन सक्दैन’ उनले भने । उनले केही गरी प्रतिनिधि सभा विघटनकै पक्षमा सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला भए ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने पनि बताए । कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउन नसके सबै मिलेर हटाउने पनि देउवाको भनाइ छ ।
नागरिक एपको फुल भर्सन सार्वजनिक, ५ लाख भन्दा बढी पटक डाउनलोड